भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, सहमत हुनेले से*यर गरौ ! « गोर्खाली खबर डटकम
भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, सहमत हुनेले से*यर गरौ !
काठमाडौं – नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, नायक नवल खड्का, कानुन व्यवसायी गीता शाह र अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्माले सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ´।
नेपालले हालसम्म राज्यको सीमा सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेकाले तत्काल कानुन बनाएर यसै आर्थिक वर्षदेखि तारजाली बनाउन परमादेशको माग रिटमा गरिएको छ । सीमा क्षेत्रलाई सुरक्षा प्रदान गर्न, फौजदारी अपराध पत्ता लगाउन र रोक्न, सीमा क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य, वातावरणको सुरक्षा र अवैध आप्रवासन रोक्नका लागि रिट दायर गर्नु परेको अधिवक्ता सापकोटाले बताएका छन् ।´
आज दर्ता भएको ३८ पृष्ठ लामो रिटमा विभिन्न देशका सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा बनेका विभिन्न कानुन, नेपालमा यसअघि भएका सीमा सुरक्षाका प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषय उल्लेख गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद, कानुन मन्त्रालय,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ`।